July 22, 2019 puntlandnews 0
Puntlandnews.net (Garoowe)-Maxkamadda sare ee dowladda Puntland ayaa muddaysay xilliga ay bilaabayso dhegaysiga kiiska marxuumad Caasha Ilyaas Aadan oo horay maxkamadaha derejada 1aad iyo rafcaanka Puntland ay saddex eedaysane dil toogasho ugu xukumeen. DAAWO
Puntlandnews.net (Garoowe)-Saacadihii ugu dambeeyey waxaa baraha bulshada lagu qorayey in xukuumadda dowladda Puntland ay ciidamo badan oo katirsan kuwa Daraawiishta Puntland geysey magaalada Galkacyo. Guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur Yare ayaa beeniyey wararka sheegaya […]
Puntlandnews.net (Garoowe)-Xilli deegamo dhowr ah ay ka jireen kacdoono shicib iyo dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah go’aamada madaxweynaha ayaa madaxweynuhu wuxuu goor dhoweyd go’aansaday inuu xabsiga ka sii daayo maxaabiis dhowr ah oo xirnayd. Madaxweynaha Somaliland […]
Gudoomiyaha gobalka Mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur oo warbaahinta goordhaweyd la hadlay ayaa beeniyey in la celinayo lacag $220Kun dollar ah taasi oo dowladda Soomaaliya ay ku taageertay dayactirka garoonka kubadda cagta ee Cawaale […]
Howlgaladani oo lagu xaqiijinayaya amniga deegaanno dhawaan laga saaray Al-Shababa ayaa ururka 31-aad ee guutada 12 April ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxaa ay ka sameeyeen deegaanno ku yaalla xadka ay wadaagaan labada Shabeelle. Waxaa […]
Mid kamid ah Magafayaashii ugu caansanaa Liibiya oo la diley iyo Soomaali badan oo xabsiga.
Inta badan Warbaahinta madaxa bannaan ee dalka Liibiya waxay qoreen in la dilay mid ka mid ah Me-gefayaasha ama Mukhalasiinta ka ganacsata Tahiibinta Muhaajiriinta Europe-doonka ah iyo Shidaalka Kontorobaanka ah. Ilo-wareedyo ayaa xaqiijiyey in la […]
Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in ay jiraan kulamo gaar-gaar ah oo ay leeyihiin waxgaradka iyo culumada magaaladaas oo ay uga hadlayaan talaabadii ay dawladdu ku xirtay qaar kamid […]
Odayaasha dhaqanka magaaladda Qardho oo kullan ku yeeshay magaaladaasi ayaa Dawladda Federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay joojiso faragalinta ay ku hayso Dawladdaha xubnaha ka ah Dawladda dhexe. DAAWO Qardho Odayaasha dhaqanka magaaladda Qardho oo kullan […]
Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimada Galmudug waxaa ka taagan Khilaaf ka bilowday sidii la isugu dhafi lahaa ciidamada Galmudug iyo ururka Ahlu Sunna. Khilaafka ayaa yimid ka dib markii Mas’uuliyiin ka tirsanaa maamulkii Ahlusunna ay diideen […]
Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in caawa halkaasi lagu xiray guddoomiyaha guddiga dib-u-dhiska wadada bartamaha Boosaaso. Guddoomiyaha oo lagu magacaabo Sheikh Maxamed Macallin Axmed ayaa waxa goor dhoweyd xabsiga […]